१५० वर्ष पुरानो एरियल फोटोग्राफीबाट तयार कफी टेबल बुक प्रकाशित
काठमाडौँ, एजेन्सी । संसारमा एरियल फोटोग्राफीको इतिहास १५० वर्षको पुगेकाे छ । ब्रिटेनका दुईजना फोटोग्राफरले यो १५० वर्षमा भएको यस्तै आश्चर्यजनक फोटोग्राफ्सको कफी टेबल बुक फ्रम अबव तयार गरेका छन, जो २१ अक्टोबर सोमवार प्रकाशित भएकाे छ। यी फोटोग्राफमा सबैभन्दा...
संसारको सबैभन्दा पुरानो मोती प्रदर्शनीमा राखिने
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलवार भने सामान्य अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २.४० विन्दुले बढेर एक हजार १३४.७९ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक ०.५० विन्दुले बढेर २४८.४९ विन्दुमा पुगेको छ...
लगेज घटाउन २.५ किलो कपडा लगाएकाे फोटाेमा ३४ हजार कमेण्ट तथा २१ हजार शेयर !
काठमाडौँ, एजेन्सी । फिलिपिन्सको एक महिलाले हवाई यात्राको दौरान एयरपोर्टमा लाग्ने अतिरिक्त लगेजको पैसा जोगाउनका लागि २.५ किलोका कपडा आफैंले लगाएकी बताएकी छन् । केही दिन पहिले गेल रोड्रिगेज नामक ती महिला मनीला एयरपोर्टमा उत्रेकि थिइन। चेक गर्नेसमयमा जब उनको...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले साढे २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २२.५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको सोमवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रति शेयर २२ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले नगद लाभांश दिनेगरी प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको उक्त...
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम सोमवार पनि जारी रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.३३ विन्दुले घटेर एक हजार १३२.४० विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक ०.३७ विन्दुले घटेर २४७.९८ मा पुगेको...
नेपाल टेलिकमले यही कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । कम्पनीले यसअघि न्यूनतम ५१२ केबीपीएसदेखि माथिको क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइरहेकामा अब न्यूनतम दुई एमबीपीएस क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो । यसअघि ११० एमबीपीएस ब्याण्डविथ...
प्लास्टिक तथा कागजको कपको विकल्पमा आयाे ‘इट कप’
काठमाडौँ, एजेन्सी । पर्यावरणलाई मध्यनजर राखेर भारतको हैदराबादको एक कम्पनीले खाद्य पदार्थबाट निर्मित इट कप उत्पादन गरी प्रयाेगमा ल्याएकाेछ । कम्पनीका अनुसार यसमा ४० मिनेटसम्म तातो तथा चिसो पेय पदार्थ राख्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार प्लास्टिक तथा कागजको कपको यो...
घरमा रहेकाे साधारण ठानिएको पेन्टिंगको मूल्य १६ करोड !
काठमाडौँ, एजेन्सी । नाइजेरियाको एक परिवारको घरमा विगत ४८ वर्षदेखि झुण्ड्याइएको २० औं शताव्दीको पेन्टिंग १६ करोडमा बिक्री भएको छ । यसको लिलामी लण्डनको सोथबी अक्शन हाउसमा भएको थियो ।यसलाईनाइजेरियाका कलाकार बेन इनवोनुले सन् १९७१ म बनाएका थिए । पेन्टिंगक्रिस्टीन...
साताको अन्तिम दिन बिहीवार धितोपत्र बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ०.७१ अङ्कले बढेर एक हजार १३७.७५ मा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ०.५४ अङ्कले बढेर २४९.१२ मा...
चिडियाघर कछुवाको ढाड टोकरी राखेर रकम स‌ंकलन !
काठमाडौं,एजेन्सी । चीनको चिडियाघरको एउटा कछुवाको ढाड/ पीठ्युँमा कछुवालाई चढाएको पैसा संकलन गर्न सकियोस भनेर टोकरी लगाइएको छ । तर, यसको व्यापक आलोचना समेत भैरहेको छ । शोसल मिडियामा भाएइल भएपछि यसका बारेमा धेरैले अपत्ति जनाएका हुन् । इन्टरनेशनल यूनियन...
धितोपत्र बजार फेरि ओरालोमा
धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पाँच अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से ५.०१ अङ्कले घटेर एक हजार १३७.०३ मा पुगेको छ । यसैगरी सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत १.६४ अङ्कले घटेर २४८.५८ मा पुगेको छ ।...
निकै उतार चढावका बीच कारोबार हुँदै आएको सुनको मूल्य नेपाली बजारमा बुधवार प्रति तोलामा १०० रुपैयाँ कम भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला ७० हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।...
प्रदेश ३ सरकारले मकवानपुरको मनहरीमा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरेर स्थापना गरिने उद्योगका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । मनहरीमा कागज उद्योग स्थापनाका लागि...
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलवार सामान्य अङ्कले सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३.६२ विन्दुले बढेर एक हजार १४०.५८ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९७ विन्दुले बढेर २५०.१४ मा पुगेको छ...
कोकाकोलाले प्लास्टिकको फोहोरबाट ग्रीन बोतल बनाउने
काठमाडौं, एजेन्सी । पेय पदार्थ उत्पादक अमेरिकी कम्पनी कोकाकोलाले अब समुद्रबाट निकालिएको प्लास्टिकको फोहोरलाई रिसाइकल गरेर पहिलो ग्रीन बोतल बनाउने दावी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उसले ३०० बोतलको पहिलो ब्याच तयार गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार उसले यो धर्तीलाई...
अब एटीएम पनि सुनको !
काठमाडौं, एजेन्सी । ब्रिटिश सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी द रोयल मिण्टले संसारकै पहिलो सुनको एटीएम कार्ड बनाएको छ । कम्पनीले यसमा १८ क्यारेट सुनको प्रयोग भएको बताएको छ । यसको मुल्य १८७५० युरो रहेको छ । उक्त डेबिट कार्डमा ग्राहकको...
पल एलनकाे सुपरयाट करीब ३६९२ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुने !
काठमाडौं, एजेन्सी । माइक्रोसफ्टका को-फाउण्डर पल एलनको ४१४ फिट लामो सुपरयाट करीब ३६९२ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुने भएको छ । अक्टोपस सुपरयाटको मूल्य करीब ३२.५ करोड़ डलर रहेको बताइएको छ । उक्त याटमा आठ डेक, एक एलिभेटर, एक सिनेमाहल, दुई...